आज पोखरामा मतदान सुरु हुँदै गर्दा घट्यो डर*लाग्दो घ*टना, सर्वसाधारण त्र*सित – " कञ्चनजंगा News "
आज पोखरामा मतदान सुरु हुँदै गर्दा घट्यो डर*लाग्दो घ*टना, सर्वसाधारण त्र*सित
No Comments on आज पोखरामा मतदान सुरु हुँदै गर्दा घट्यो डर*लाग्दो घ*टना, सर्वसाधारण त्र*सित
eQmk'/sf] u¶f3/df j]jfl/z] cj:yfdf e]l6Psf] ;s]6 ad g]kfnL ;]gfsf] 6f]nLn] l8:kf]hn ub} . tl:j/ M/f]zg ;fksf]6f, /f;;
कास्की- पोखरा–२ मतदान केन्द्र नजिकै ब म बि स्फोट भएको छ । पोखरा ३३ बागमारा र पोखरा १६ अर्मलामा बि स्फोट भएको बताइएको छ । बागमारामा मतदान केन्द्रको ५ सय मिटर नजिकै बि स्फोट भएको बताइएको छ । मतदान गर्न लागेको मतदान स्थलबाट करिब ५० मिटर नजिकै बम बिस्फोट भएको प्रगरीले जनाएको छ । यद्यपि मानविय क्षती भने भएको छैन् ।
यस क्षेत्रमा ३२ मतदानस्थलका ८२ मतदान केन्द्रमा निर्धारित समयमै मतदान शुरु भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कास्कीका प्रमुख महेन्द्रराज सुवेदीले जानकारी दिए । प्रायः सबै मतदान केन्द्रमा मतदाता बिहानैदेखि मतदान गर्न लामबद्ध भएका छन् । बिहानको समयमा धेरै बेर मतदान गर्नका लागि कुर्न नपर्नुपर्ने उद्देश्यका साथ कतिपय मतदाता बिहानै मतदान गर्न आएका हुन् । यसैबीच, मतदानस्थलमा सुरक्षाको व्यवस्था कडा बनाइएको छ ।
त्यस्तै दाङमा उपनिर्वाचनलाई लक्षित गरी दाङमा ब म बि स्फोट भएको छ । दाङमा क्षेत्र नम्वर ३ ख मा प्रदेशसभा र घोराही वडा नम्बर १६ आज हुन लागेका उपनिर्वाचनलाई लक्षित गरी वि स्फोट गराइएको हो । निर्वाचन हुने स्थल वडानम्वर १६ बाहुन डाँडामा आज बिहान बि स्फोट भएको हो । बिस्फेट भए लगत्तै रक्षाकर्मी पुगेर अनुसन्धान थालेको बताइएको छ ।बि स्फोटबाट कुनै क्षति भने भएको छैन् । । कसले के बि स्फोट गराएको हो भन्ने खुलिनसकेको बताइएको छ ।
दाङमा उपनिर्वाचनका लागि प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं ३ (ख) र घोराही उपमहानगरपालिका–१६ को वडाध्यक्ष पदका लागि मतदान शुरु भएको छ । बिहान ७ बजेबाट शुरु भएको मतदान साँझ ५ बजेसम्म जारीरहने छ । मतदान सकिएलगत्तै आज बेलुकीबाटै मतगणना गरिने मुख्य निर्वाचनको कार्यालय जनाएको छ ।
मतगणनाको लागि पनि सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकेको हुँदा दलसँगको सहमतिमा दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतको कार्यालयमा आज बेलुकाबाटै मतगणना गरिने मुख्य निर्वाचन अधिकृत रितेन्द्र थापाले जानकारी दिए । घोराही उपमहानगरपालिका–१६ को मतदान निर्वाचन कार्यालयको नजिक भएको हँुदा पनि छिट्टै मतगणनाको लागि कुनै समस्या नभएको उनको भनाइ थियो ।
“राजनीतिक दलका बीच दलीय सहमति भए घोराही–१६ को उपनिर्वाचनको मतगणना आजबाटै सुरु हुन्छ”, उनले भने, “तत्काल गणना शुरु गर्दा प्रक्रिया सहज हुने र भोलिपल्ट गर्दा झन्झटिलो हुने हुँदा दलहरुको सहमतिमा आजबाटै मतगणना शुरु गर्ने तयारीमा रहेका छाँै ।” घोराही उपमहानगरपालिका–१६ सदरमुकाम नजिकै भएकाले मतपेटिका समयमै सङ्कलन हुने हुँदा तत्काल गणना सम्भव भएको निर्वाचन अधिकृतले बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालका अनुसार घोराही उपमहानगरपालिका–१६ को मतगणना दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतको परिसरभित्र गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यस्तै प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं ३ (ख) को मतगणना भने आइतबार बिहानदेखि गरिने भएको छ । उक्त क्षेत्रका केही मतदानस्थल विकट क्षेत्रमा रहेका कारण मतपत्र ल्याउन समय लाग्ने भएकाले प्रदेशसभाको मतगणना आइतबार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको रिजालले बताए । प्रदेशसभाको मतगणना जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा गरिने भएको छ ।
उपनिर्वाचनका लागि जिल्लाका ३४ निर्वाचनस्थल तथा ८२ मतदानकेन्द्र तोकिएका छन् । निर्वाचनका लागि ७३६ कर्मचारी खटिएका छन् । निर्वाचन क्षेत्र नं ३ (ख) मा ६८ हजार ७१९ र घोराही उपमहानगरपालिका–१६ मा चार हजार ४५३ मतदाता छन् ।
नेपाली सेनाको तस्विर सांकेतिक तस्विर मात्र रहेको छ
← अचम्मै भो ! नेपालको यो ठाउँमा दियो गोरुले दूध (हेर्नुहोस भिडियाे सहित) → आज उपनिर्वाचन : मतदान शुरु हुँदै गर्दा कास्कीमा घट्यो रोचक घट्ना हेर्नुहोस !